Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kulan ku yeeshay Ganacsato Soomaaliyeed oo sida ay shegeen Hantiidooda la lunsaday. Ganacsatadan ayaa eedeyn u soojeediyay Shirkado Caalami ah oo ka kala diiwaan gashan Imaaraadka Carabta iyo magaalada Muqdisho oo ay...
Axmed Cali Cabdalla oo ku sugan Dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in dhiigga aabihii Cali Cabdalla Saalax uusan ahayn mid sidaas ku dhamaaday islamarkaana dagaalka Yemen uu hadda billow yahay. Axmed oo 2012kii Xabsi Guri ku ahaa Dalka Imaaraadka ayaa wareysi siiyay TV laga...
Xildhibaan C/rashiid Xidig oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka Somalia, ayaa si adag uga hadlay mas’uuliya darida lagula dhaqmo Xubnaha kamid noqda baarlamaanka Somalia marka uu wakhtiga ka dhamaado kadib. Xildhibaan Xiddig waxa uu tilmaamay in Xildhibaanada uu wakhtiga ka...
Ururka xamaas ayaa markii ugu horeysay ka hadlay go’aanka uu Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo ku diiday la kulanka Ra’isul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. Xamaas, ayaa sheegtay inay aad usoo dhaweyneyso Mowqifka uu Farmaajo kaga hor imaaday qorshooyinka uu...
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo horey xilal uga soo qabtay dowladihii hore ee soo maray Soomaaliya ayaa ka hadlay jidadka xiran muddo laba maalin ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuru ayaa sheegay in dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud Farta loogu fiiqiyey inay jidad xirtay, haddana ay mudan...
Taliyaha Qeybta 43 Aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya general cismaaciil Saxardiid oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa waxaa uu sheegay in hogaamiyaha ugu sareeya Al-Shabaab Axmed Diiriye Abuu cubeyda. Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in...
Duqa Degmada Gaalkacyo Ee Maamulka Puntland Maxamuud Yaasiin Tumeey oo Saxaafadda kula hadlay Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa sheegay in Ciidamada Itoobiya ay la Wareegeen Degaanno ka tirsan Gobolka Mudug oo Xilligii Dowladdii dhexe ay joogi jireen Ciidamada Soomaaliya....
Shirka Amniga Qaranka oo Madaxweeynaha Soomaakiya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu shalay ka Furay Magaladda Muqdisho ayaa Maanta lasoo Gabangabeeynayaa iyado isla shalayba la soo saaray War murtiyeedkii shirka. War Murtiyeedka lasoosaaray wuxuu sheegayaa in Dib u habeeyn lagu...
Wasiirka amniga Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Abuukar Islow ayaa faah faahin ka bixiyay xaaladda amaan ee Soomaaliya gaar ahaan amaanka magaalada oo maalmihii la soo dhaafay ay ka jirtay xaalad daganaan ah. Wareysi uu siiyay Telefishanka Qaranka ee SNTV ayaa waxa uu sheegay in...
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saaka oo Talaado ah xukunno isugu jira dil iyo xabsi ku ridday afar nin oo eedeynayaal ah, kuwaasoo Maxkamadda ku soo eedeysay inay Shabaab u qaabilsanaayeen qaraxyada Muqdisho. Guddoomiyaha Maxkamadda darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka...